Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha zaseYurophu » IYurophu isusa imikhawulo yezokuvakasha kwamanye amazwe, ifaka ohlwini lwabamnyama amanye
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba Ezihlukahlukene
I-European Council ivuselela uhlu lwamazwe, izifunda ezikhethekile zokuphatha nezinye izinhlangano neziphathimandla zezindawo lapho imingcele yokuhamba kufanele isuswe khona.
I-EU iphakamisa kancane kancane imikhawulo yesikhashana engabalulekile yokuhamba.
Amazwe amahlanu nebhizinisi elilodwa / igunya lendawo lisusiwe ohlwini lokuphakanyiswa kwemikhawulo.
I-Israel, iKosovo, iLebanon, iMontenegro, iRiphabhuliki yaseNyakatho yeMakedoniya kanye ne-USA zisusiwe ohlwini.
Ngemuva kokubuyekezwa ngaphansi kwesincomo sokuphakanyiswa kancane kancane kwemikhawulo yesikhashana ekuhambeni okungabalulekile ku-EU, uMkhandlu uvuselele uhlu lwamazwe, izifunda ezikhethekile zokuphatha nezinye izinhlangano neziphathimandla zezindawo okufanele kususwe imikhawulo yazo.
Ikakhulu, i-Israel, iKosovo, iLebanon, iMontenegro, iRiphabhuliki yaseNyakatho yeMakedoniya kanye ne i-United States of America zisusiwe ohlwini.
Akubalulekile hamba uye e-EU okuvela emazweni noma kumabhizinisi angabhalwanga ku-Annex I kungaphansi kwemikhawulo yokuhamba yesikhashana. Lokhu ngaphandle kokubandlulula ukuthi kungenzeka ukuthi amazwe angamalungu asuse umkhawulo wesikhashana ohambweni olungabalulekile oluya e-EU kubahambi abagonywe ngokuphelele.
Njengoba kubekiwe ezincomweni zoMkhandlu, lolu hlu luzoqhubeka lubuyekezwa njalo futhi, njengoba kungaba njalo, libuyekezwe.
Ngokuya ngemibandela nemibandela ebekwe kusincomo, kusukela ngomhlaka 30 Agasti 2021, amazwe angamalungu kufanele kancane kancane asuse imikhawulo yokuhamba emingceleni yangaphandle yabahlali bamazwe alandelayo alandelayo:
I-China (ngokuya ngokuqinisekiswa kokuphindisela)
Imikhawulo yokuhamba kufanele iphakanyiswe kancane kancane ezifundeni ezikhethekile zokuphatha zaseChina Hong Kong naseMacao.